OpoSoft Video Converter Professional v5.0 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
OpoSoft Video Converter Professional v5.0
​ကဲ ​ဒါ​လေး​က​တော့ ​အ​တော်​လေး ​ကောင်း​လို့ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ . ​ဘာ ​ကောင်း​တာ ​လဲ​ဆို​ရင် ​တစ်​ခြား video converter ​များ​လို convert ​ကို​တင် ​လုပ်​တာ ​မ​ဟုတ်​ဘဲ . movie ​များ​ကို ​မ​လို​ချင်​တဲ့ ​အ​ပိုင်း​များ​ကို ​ဖြတ်​ပစ်​တာ​တို့ ​အ​လင်း ​အ​မှောင် ​ချိန်​တာ​တို့ ​စ​တဲ့ effect ​များ​ကို​ပါ ​ပြု​ပြင်​လို့ ​ရ​ပါ​သေး​တယ် .
AVI, DivX, XviD, MPEG, MPG, MPE, DAT, WMV, ASF, RM, RMVB, OGM, MP4, FLV, 3GP, MKV, VOB ,MOV etc. ၊ High-Definition video ​ဖိုင်​များ (H.264/MPEG-4 AVC, AVCHD Video (*.m2ts, *.mts)၊ Apple TV h.264 720P, MKV, HD WMV, MPEG2/MPEG-4 TS HD Video, etc) ​များ​ကို​ပါ convert ​လုပ်​ပေး​ပါ​တယ် . ​ဒါ့​အ​ပြင် DVD format ​မှ​တစ်​ဆင့် ​ပေါ်​ပျူ​လာ ​ဖြစ်​နေ​တဲ့ AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, H.264/MPEG-4 AVC, DivX, XviD, MOV, ASF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VOB ​စ​တဲ့ format ​များ​ကို​လဲ ​ပြောင်း​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ် . ​ကြည့်​ကျက်​ပြီး​သာ ​ကိုင်​လိုက်​ကြ​ပါ . ​လွယ်​ပါ​တယ် .
alister January 23, 2010 at 10:16 AM
​အ​ကို​ခင်​ဗျား ​ကျွန်​တော်​တို့​လို ​နိုင်​ငံ​ခြား​မှာ ​သင်​ကြား​ပေး​မယ့်​ဆ​ရာ​မ​ရှိ​လို့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကိုင်​ပြီး ​အင်​တာ​နက်​ကြည့်​ရင် ​ဘာ​လုပ်​ပြီး​ဘာ​ကိုင်​ရ​မှန်း​မ​သိ​တဲ့ ​လူ​တွေ​အ​တွက် ​အ​ကို့blog ​လေး​ဟာ ​လမ်း​ပြ​ကြယ်​လေး​ပါ။ ​ဒါ​ဟာ​အ​မှန်​တ​ရား​တ​ခု​ပါ။ ​အ​ကို​ကျန်း​မာ​စွာ​ဖြင့် ​အ​များ​အ​ကျိုး​ကို ​နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ ​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​ပါ​စေ​လို့ ​ဆု​တောင်း​ပေး​လျက်​ပါ။
Zaw January 30, 2010 at 3:13 PM
​ကျွန်​တော် DAT ​က​နေ MP4 ​ပြောင်း​တာ ၁​မိ​နစ်​စာ ​တ​ပိုင်း​တ​စ​ပဲ Output MP4 ​ပဲ ​ရ​ပါ​တယ်.​အ​ကြံ​ပေး​ပါ​ဦး
​ပေး​ထား​တဲ့ DL link ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို Download ​လ...